AmaNgqina KaYehova Ayabathanda Abazalwana Bawo | Incwadi Yonyaka Ka-2015
Isikolo Esitsha Siyanceda
UYehova wakusikelela ukuzibhokoxa kwabakhonzi bakhe eDominican Republic. Ngo-1994 kwakukho abavakalisi boBukumkani abayi-16 354 kumabandla ayi-259. Ngenxa yolo lwando luvuyisa ngokwenene, kwafuneka abadala abafanelekayo abangakumbi nezicaka zolungiselelo. Kwangaloo nyaka, iQumrhu Elilawulayo lavuma ukuba eDominican Republic kuqhutywe iSikolo Sokuqeqesha Abalungiseleli, ngoku esithathelwe indawo siSikolo Sabavangeli BoBukumkani.
Ngo-Oktobha 2011, abafundi abayi-600 baphumelela kwiiklasi eziyi-25 ezaziqhutyelwa apha eDominican Republic. Sithetha nje, bangaphezu kwesiqingatha abaphumelele kwezi klasi abakwinkonzo yexesha elizeleyo, abayi-71 ngoovulindlela abakhethekileyo, baze abayi-5 babe ngabaveleli beziphaluka. Iiklasi ezilishumi zesi sikolo beziqhutyelwa kwiofisi yesebe, kodwa ukususela kweyeshumi elinanye ziye zaqhutyelwa kwindawo elungiselelwe sona eseVilla González.
“AmaNgqina KaYehova Ahoyene”
NgoSeptemba 22, 1998, iNkanyamba uGeorges yantlitha lonke elaseDominican Republic, isitsho ngomoya owawuvuthuza ngesantya seekhilomitha eziyi-190 ngeyure yaza yonakalisa ngendlela engathethekiyo. Amawakawaka abantu aphulukana namakhaya, kwaza kwafa abangaphezu kwe-300. IKomiti Yokunceda Ngexesha Lentlekele yabeka izinto zokunceda kwiHolo yoBukumkani eseLa Romana yaye yayincediswa yiKomiti Yokwakha Yenqila. Amalunga ne-300 amatsha-ntliziyo awancedisa kuloo msebenzi, kuquka namaNgqina awayevela kumazwe ayi-16.
Kwafuneka kulungiswe okanye kwakhiwe iiHolo zoBukumkani eziyi-23 namakhaya abazalwana noodade angaphezu kwe-800. Ngokomzekelo, intliziyo kaCarmen, uvulindlela othe ngxi osel’ ekhulile, yaba lihlwili xa le nkanyamba yadiliza indlu yakhe awayehlala kuyo kangangeminyaka eyi-38. Noko ke, wayengakwazi ukuzibamba luvuyo xa kwafika iqela labazalwana abayi-15 lize kwenza umgangatho wendlu yakhe entsha. Uthi: “UYehova akasilibali, uyasinyamekela. Khawujonge le ndlu ndiyakhelwa ngabazalwana. Abamelwane bam bathi: ‘AmaNgqina kaYehova ahoyene; athandana ngokwenene.’” Kwavakala amazwi afana nala kulo lonke elo njengoko amaNgqina ayenceda abazalwana noodade.
Nangona iNkanyamba uGeorges yenza umonakalo omkhulu, imigudu eyenziwa ngabantu bakaYehova abanothando yabathuthuzela abazalwana. Okubaluleke nangakumbi kukuba, indlela asebenza ngokuzincama ngayo amatsha-ntliziyo yamenza wadunyiswa uYehova, umthombo wentuthuzelo yokwenene.
Kwakhiwa IiHolo ZoBukumkani Ezingakumbi
Ekubeni babesanda abafundi, kwafuneka iiHolo zoBukumkani ezingakumbi. Ngenxa yoko, ngoNovemba 2000, abazalwana baseDominican Republic baqalisa ukwakha iiHolo zoBukumkani ngoncedo lwelungiselelo lokunceda amazwe angathathi ntweni. Ngenxa yoko, ibandla lalinokukwazi ukwakha iHolo ethi ndijonge kwiiveki nje ezisibhozo. Kwathi kusiba nguSeptemba 2011, abe amaqela amabini akhayo sele akhe okanye alungisa iiHolo zoBukumkani eziyi-145.
Ezi zakhiwo zenze abantu banomdla ngokwenene, ukanti namatsha-ntliziyo akhayo aye anikela ubungqina obuhle. Ngokomzekelo, kwidolophana ekumntla-ntshona weli lizwe, abazalwana bafumana isiza esasinokuba seseHolo yoBukumkani. Omnye uvulindlela okhethekileyo wabuza umnikazi waso ukuba akasithengisi na. Wathi: “Sanukuchitha ixesha lenu kuba andizukunithengisela esi siza, ingakumbi xa niza kwakha icawa.”
Kungekudala emva koko, lo mfo waya kubona umkhuluwa wakhe oliNgqina likaYehova ePuerto Plata. Xa efika apho weva ukuba lo mkhuluwa wakhe ugulayo uthathwe yenye intsapho engamaNgqina ukuze imnyamekele. Le ntsapho yayimsa kugqirha, ezintlanganweni nasentsimini. Le ndoda yabuza umkhuluwa wayo ukuba ubabhatala malini aba bantu. Wathi: “Andibabhatali nemdaka. Kaloku ngabazalwana bam aba.”
“Ndiyaqala ukubona abantu abanobubele nabamanyene ngolu hlobo”
Le ndoda yayingakwazi ukuwuvala umlomo bububele obungathethekiyo bamaNgqina, kangangokuba yabiza laa vulindlela ukhethekileyo yaza yamxelela ukuba ingawathengisela amaNgqina isiza sayo. Abazalwana basithenga baza baqalisa ukwakha iholo. Ngaphambili, umfazi wale ndoda wayengawathandi amaNgqina kaYehova. Kodwa xa wabona indlela ababesebenza ngokumanyene ngayo abazalwana wathi, “Ndiyaqala ukubona abantu abanobubele nabamanyene ngolu hlobo.”